Pramiracetam ntụ ntụ (68497-62-1) hplc ma98% | AASraw Nootropics
/ ngwaahịa / Nootropics ntụ ntụ / Pramiracetam ntụ ntụ
SKU: 68497-62-1. Category: Nootropics ntụ ntụ
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Pramiracetam ntụ ntụ (68497-62-1), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkwa mma.
Pramiracetam ntụ ntụ bụ ihe mgbakwunye racetam nke sịntetị maka ebumnuche nke mmụba nke uche, ya na ihe àmà ndị na-akwado ya iji kwado ya iji mee ihe maka ncheta oge nchekwa. Ọ bụ ezie na usoro a amaghị nke ọma, ọ nwere ike ime ka acetylcholine synthesis.
Pramiracetam ntụ ntụ video
Raw Pramiracetam ntụ ntụ isi Characters
aha: Pramiracetam ntụ ntụ
Molekụla Formula: C14H27N3O2
Ọbara arọ: 269.38
Raw Pramiracetam ntụ ntụ na ọgwụ SMART
Coluracetam (MKC-231) bụ ọgwụ racetam bụ nke a sịrị na ọ bụ ọgwụ na-eme ka ọ bụrụ nkwalite. O nwere ike ichekwa ịbịakwute n'ime ụbụrụ ma ọ bụrụ na ha enweghi nsogbu, ma ugbu a, ọ dịghị ihe akaebe maka mmetụta nootropic.
Raw Pramiracetam ntụ ntụ Usage
Ugbu a, ihe akaebe na-eji Pramiracetam ntụ ntụ na ụmụ mmadụ na-eji 400mg thrice kwa ụbọchị ma ọ bụ 600mg ugboro abụọ kwa ụbọchị; usoro ọgwụgwọ abụọ a na-emepụta 1,200mg nke Pramiracetam ntụ ntụ kwa ụbọchị.
O doro anya na ọ bụrụ na eji eri nri Pramiracetam, ọ gaghị edozi ma ọ bụrụ na 1,200mg bụ ezigbo usoro ọgwụgwọ ma ọ bụ na ọ bụghị. Otú ọ dị, nke a na-apụta dị irè.
Kedu Ụdị Nsonaazụ M Kwesịrị Ịmanya Anya site na Raw Pramiracetam ntụ ntụ
Pramiracetam ntụ ntụ na-eme ka ọrụ ụbụrụ rụọ ọrụ ma na-enye nchekwube dị mma, karịsịa banyere ebe nchekwa na nchịkọta.
N'ihi na ọ na-emekarị ka enwe mmetụta nke a na-ele anya na-elekwasị anya tinyere ọnụ ọgụgụ nke mmetụ obi, a na-ejikarị ya tụnyere Ritalin. Ụfọdụ n'ime uru ndị a maara nke ọma na Pramiracetam ntụ ntụ bụ ndị a:
Nchekwa kachasị mma - Ebe ọ bụ na ọ na-akpali hippocampus, akụkụ nke ụbụrụ bụ isi maka isi ihe ncheta ọhụrụ, Pramiracetam raw powder bụ nke a maara dịka onye na-eme ka nchekwa ihe dị ike. Ihe ka ọtụtụ ndị na-akọ na-egosi mmụba dị mma na nchịkọta nchekwa na ọsọ nke ncheta, nkwupụta nke ụmụ anụmanụ na-eme.
Ịmụbawanye Ịmụta Ịmụta - Ndị ọrụ na-akọ na Pramiracetam ntụ ntụ na-eme ka ịmụtakwu ngwa ngwa, dị mfe karị, ma na-atọ ụtọ karị. Enwere ike ịkọwa nke a ma ọ dịkarịa ala na akụkụ nke Pramiracetam ntụ ntụ na-eme ka nhụzi dị ukwuu karịa.
Mmetụta uche na Ihe Omuma nke uche - Ọtụtụ ndị ọrụ na-ekwu na ịnweta Pramiracetam ntụ ntụ na-enye ha mmetụta siri ike nke iche echiche nke uche, ilekwasị anya, ngwa ngwa echiche, na echiche doro anya.
Ọhụụ nke mmekọrịta mmadụ na eze - Ọtụtụ ndị ọrụ na-ekwu na ịnweta Pramiracetam raw ntụ ntụ na-enyere ha aka ịnụ ụtọ ma na-ekere òkè zuru oke na ọnọdụ mmadụ, uru nke yiri ka ọ ga-emetụta ụbụrụ zuru ezu nke ụbụrụ kamakwa ọ pụkwara inwe mmetụta dịka mmetụta mmetụta uche, nke nwere ike belata mmekọrịta nchegbu.
Ọdịdị Nghọta Ịdị Mma - Ndị ọrụ na-ekwuputakarị nghọta zuru ezu ma ọ bụ dịkwuo mma nghọta, gụnyere ụda dị elu ma dịkwuo ụtọ karị ma ghọtakwuo anya na nghọta doro anya karịa nke ọma na ọdịiche dị ukwuu.
Nchekwa ncheta - N'ọnwa ndị a na-ejikarị agwọ ọrịa, Pramiracetam ntụ ntụ egosiri na ọ bụ ọgwụgwọ dị irè maka ncheta nchekwa na nsogbu ndị ọzọ nke ụbụrụ kpatara. Ọ bụkwa otu n'ime ụdị nootropics dị iche iche a nwalere na United States dị ka ọgwụgwọ nwere ike ịgwọ ọrịa nke ọrịa metụtara Alzheimer na ọrịa ndị ọzọ na-adịghị ahụ. Otu nchọpụta egosipụtala na ọ ga-enwe ike ịmịnye ndị ọrụ afọ ofufo ahụike sitere na 18-65 afọ.
Kedu ka Raw Pramiracetam ntụ ntụ si arụ ọrụ
Dị ka ọtụtụ nootropics, Pramiracetam ntụ ntụ na-emetụta ntọhapụ nke ndị na-ahụ maka ntanetransite, ụbụrụ ụbụrụ nke na-esi na otu mkpụrụ ndụ nerve na-ebunye ndị ọzọ. Ma Pramiracetam ntụ ntụ na-eme ya n'ezoghị ọnụ, n'ụzọ dịgasị iche na omume ndị ọzọ nke racetam, ọ na-akpalikwa ụbụrụ n'ụzọ ndị ọzọ.
N'adịghị ka piracetam, Noopept, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-ewu ewu, Pramiracetam raw ntụ ntụ bụ abụba soluble kama soluble mmiri, nke pụtara na ọ na-etinye ya n'ime ọbara site na abụba bara uru. Ọ na-ebute ọnụ ọgụgụ kasị elu na kachasị bioavailability dịtụ ngwa ngwa, n'ozuzu ya n'ime oge 30, ọ na-enwekwa ọkara ndụ nke 4-6 awa.
Ọtụtụ racetams na-arụ ọrụ site na ndị na-akpali akpali kpọmkwem ebe ndị na-anabata ihe ntanetransmitter ma si otú ahụ na-amụba mmepụta na ntọhapụ nke ụfọdụ ndị na-ahụ maka ntanetransite, ma Pramiracetam ntụpụ adịghị eme ka mgbanwe dị na ya dị elu, ọ pụtaghị na ọ nwere njikọ ọ bụla maka onye ọ bụla na-ahụ maka ntanetransmitter.
Ihe kachasị mkpa ya bụ mmụba dị ịrịba ama na ịchọta ihe dị mma na hippocampus, akụkụ nke ụbụrụ dị oké mkpa iji guzobe ncheta oge.
Choline bụ precursor nke acetylcholine, onye neurotransmitter nke na-etinye aka na usoro ntụgharị uche nke gụnyere ịmụta ọsọ ọsọ, ncheta, na nche.
Site n'iji nlezianya na-ebido, Pramiracetam raw ntụ ntụ na-eme ka ntọhapụ nke acetylcholine na-eme ka ọrụ dịkwuo elu na hippocampus. N'ihi na akụkụ a nke ụbụrụ dị oké mkpa iji rụọ ọrụ nlekota, ihe mkpali n'ozuzu nke Pramiracetam ntụpụ na-emepụta nwere ike imezi ma ebumpụta ụwa ọhụrụ na ijigide akwụkwọ ma ọ bụ ncheta oge. Ọrụ ụba na hippocampus na-eme ka ọbara na-erugharị n'ụbụrụ, bụ nke na-eme ka nchekwube ma meziwanye ikike ime uche na n'ozuzu.
Pramiracetam raw ntụ ntụ nwere ike ịnwe usoro ihe omume ndị ọzọ. Ndị nnyocha na-eche na na mgbakwunye na mmetụta ya na ụbụrụ, Pramiracetam ntụ ntụ na-arụ ọrụ n'ime ụlọ ndị dị n'èzí ụbụrụ nke na-adabere na gland adrenal. Ihe ọmụmụ ụmụ anụmanụ na-atụ aro na Pramiracetam ntụ ntụ nwere ike ịbawanye ma ọ bụ weghachite ụbụrụ akpụkpọ anụ, nke na-eme ka mkpụrụ ndụ banye.
N'adịghị ka ọtụtụ ndị ọzọ racetam class nootropics, Pramiracetam raw ntụ ntụ adịghị apụta na-arụsi ọrụ ike ịgbanwe ma wakefulness ma ọ bụ obi na-ekwu. Nke a na-akọwa Pramiracetam ntụ ntụ na njedebe na mmepụta na ntọhapụ nke ndị neurotransmitters nke nwere mmetụta kasịnụ n'ahụ ọnọdụ na nchekasị dị ka serotonin, GABA, na dopamine.
Pramiracetam ntụ ntụ bụ otu n'ime ihe ndị na-adọrọ adọrọ nke na-adọrọ adọrọ, na-enye ihe kachasị ike nke ihe ọ bụla n'ime ihe mgbakwunye racetam-class.
Omume ya pụrụ iche kachasị ọrụ ụbụrụ, melite ebe nchekwa, ikike mmụta, anya, na ọbụna nghọta dị egwu.
Ọ na-arụ ọrụ nke ọma n'onwe ya, ọ pụkwara ịbụ ihe dị oké ọnụ ahịa na mgbakwunye na ndị ọzọ nootropics, ịkwalite na ịgbasa mmetụta ha.
Na ngwa ngwa ịghọ onye ọkacha mmasị na ụmụ akwụkwọ, ndị edemede, na onye ọ bụla nwere mmasị ịbawanye ikike uche ha, Pramiracetam ntụ ntụ dị ọhụrụ nye ọtụtụ ndị mmadụ mana ọ na-amalite iji nweta nkwado dị mma dị ka ihe na-enweghị atụ.
Pramiracetam ntụ ntụ bụ mmepụta ihe mmepụta ihe nke piracetam, chọpụtara na nke Parke-Davis na 1970s. Ọ bụ mgbakwunye kachasị mkpa, echere na ọ bụ na 5-30x nwere ike karịa piracetam.
A na-ere ya na Europe n'okpuru aha ndị a na-akpọ Neupramir, Pramistar, na Remen, e dekwara ya n'ebe ahụ maka ọgwụgwọ ọrịa dyslexia, ADHD, nsogbu na nsogbu ncheta nke ọrịa Alzheimer na ọrịa ndị ọzọ na-akpata.
Ọ na-ama jijiji na US na 1979 mana USFDA anaghị akwado ya iji mee ihe ọ bụla. Otú ọ dị, a na-amụrụ ya ọtụtụ ihe dị ka ọgwụgwọ nwere ike ịgwọ nsogbu nsogbu uche na ncheta ncheta metụtara ọrịa Alzheimer na mmerụ ụbụrụ. A na-amụkwa ya dịka ọgwụgwọ maka ọrịa dịgasị iche iche na-ahụ maka nsogbu usoro nsogbu.
Pramiracetam Ntụ ntụ ntụ
Pramiracetam Ntụ ntụ ntụ ntụ ntụ
Raw Pramiracetam ntụ ntụ Marketing
Raw Pramiracetam ntụ ntụ nwere ihe ọ bụla na-emetụta
A na-ejikarị na-eme ka ọtụtụ ihe na-eme ka a na-eleta na-eme ka a na-edozi ya.
Ihe kachasị emetụ n'ahụ bụ isi ọwụwa, nke a na-enwekarị ike igbochi site na iji ya mee ihe.
Ihe ndị ọzọ na-adịghị emetụtakarị, gụnyere nhụjuanya afọ na mmetụta nke ụjọ ma ọ bụ ọgba aghara, na-ejikọta ya na usoro dị elu ma nwee ike, ya mere, zere site n'ibilata usoro onu ogugu.
Pramiracetam ntụ ntụ bụ nke na-adịghị eri ahụ, ọ dịghịkwa mmetụta ọjọọ dị iche iche nke iji oge dị ogologo eme ihe. N'ezie, enwere ihe àmà na mgbakwunye a nwere ike ịkwalite ahụike nke ụbụrụ na ruo oge ụfọdụ ịmeghachi ọrụ n'ime obi ike.
Esi zụta Pramiracetam ntụ ntụ si AASraw
68497-62-1 Pramiracetam ntụ ntụ AASraw HNMR
Nootropic Pramiracetam ntụ ntụ: uru, usoro onyonyo, mmetụta ndị dị na ya
1 nyochaa maka Pramiracetam ntụ ntụ
Pramiracetam ntụ ntụ bụ ọgụgụ isi
N-Methyl-D-aspartic acid (NMDA) ntụ ntụ
Citrate (Nolvadex) ntụ ntụ nke Tamoxifen
Adrenosterone ntụ ntụ